Lọ nkwari akụ 5 na Spain na amara na okomoko | Akụkọ Njem
Hotelslọ nkwari akụ 5 na Spain na amara na okomoko
Maria José Roldan | | Spain obodo, Pontevedra, Sevilla, Valencia
Mgbe oge ezumike ma ọ bụ ụbọchị izu ike rutere, ọ dịghị mgbe ọ na-ewute ịmara ụlọ oriri na ọ hotelsụ toụ iji nweta ha dịka ebe enwere ike ịga. Spain bụ obodo mara mma na obodo ọ bụla na nkuku ya, Ha na-enye ọtụtụ gastronomy, ala, ugwu, osimiri na ọtụtụ oge ehihie na abalị na-atọ ụtọ ebe ọ bụla ị na-aga, ọ bụ ya mere Spain ji bụrụ mba nke ndị njem si mba ọzọ na-achọ. Chọrọ ịma ụlọ nkwari akụ mara mma na Spain?
Taa m chọrọ ịgwa gị okwu ụfọdụ ụlọ nkwari akụ mara mma na Spain nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ ya akụrụngwa, kamakwa na mgbe ị na-aga otu obodo ị pụrụ ịnụ ụtọ-agaghị echefu echefu ọnụnọ. Anyị enweghị ike ịgọnahụ na mgbe ị na-aga obodo ọzọ, ebe ị nọ dị ezigbo mkpa n'ihi na ọ ga-eme ka ị nwee mmetụta dị ebe ahụ n'ihi nkasi obi ya. Enweghị oge ọzọ, gụọ iji chọpụta ụfọdụ nke kacha mma Utilọ nkwari akụ dị na Spain.
1 Nkwari akụ Alfonso XIII (Seville)
2 Okporo ụzọ Palacio del Bailio (Córdoba)
3 Hospes Palau de la Mar Hotel (Valencia)
5 Nnukwu ụlọ oriri na ọ Donụ Donụ Don Gregorio (Salamanca)
Nkwari akụ Alfonso XIII (Seville)
Alfonso XIII abụghị ụlọ nkwari akụ nke oge a dịka ị nwere ike ịtụ anya taa, mana ọmarịcha ya na ụlọ ọrụ ọdịnala ga-eme ka ị nwee ọ asụ karịa mgbe ọ bụla ọzọ. ezigbo ụlọ nkwari akụ ise Sevillian. Ọ bụ ụlọ nkwari akụ nke ọtụtụ ndị ama ama mba na mba ụwa maara, yabụ ọ bụrụ na onye a ma ama na-abịa Spain, ha agaghị ala azụ ịnọ na họtel a mara mma.
Ọ dị n'akụkụ Puerta de Jerez na nso Katidral ahụ, nke dị na etiti Seville, dịkwa nso na Reales Alcázares, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime njem nleta na obodo a mara mma, ị gaghị enwe nsogbu ịme ya. Thelọ nkwari akụ ahụ nwekwara echiche mara mma nke ị nwere ike ịhọrọ mgbe ị na-edebanye ọnụ ụlọ gị. A na-ahụta ya dị ka otu n'ime ụlọ nkwari akụ na oke ugwu kachasị mma n'ụwa ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe na-erughị 1929.
Ọ bụ ezie na ụlọ nkwari akụ ahụ adịla ọtụtụ afọ, emezigharịrị ya na-ejigide mmetụ mbụ ya nke na-enye ya akụkọ ihe mere eme na nkwado, ọ dịkwa ka ọ bụ ụlọ nkwari akụ e wepụtara na ọrụ nka. Akara aka maka ndị njem na-abịa obodo ahụ, yana ndị Sevillians n'onwe ha.
Okporo ụzọ Palacio del Bailio (Córdoba)
Hotellọ nkwari akụ a dị na obi akụkọ ihe mere eme nke obodo Córdoba, nke a makwaara dị ka obodo Caliphal. E wezụga ụlọ nkwari akụ ahụ E kwupụtara na 1982 dị ka Akụ nke Mmasị Omenala na ụdị nke Ememe Ncheta nke Afọ, ya mere ị pụrụ iche n’echiche ịdị ebube ya. Na mgbakwunye, ụlọ nkwari akụ ahụ na-anọchi anya nchikota ezumike, ọdịmma, ọdịbendị, nka, akụkọ ihe mere eme na gastronomy.
Ọ bụ ezie na ụlọ nkwari akụ ahụ anọwo na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ iri afọ, ha echekwala nke ọma oge na-aga n'ihi ọrụ mweghachi bara uru. Ọrụ ndị a ejirila chekwaa oke mma ya iji ghọta akụkọ ihe mere eme nke obodo Córdoba na ihe ọ na-egosi gị na akụrụngwa ya. Na nnukwu ogige, ime obodo, ebe ịsa ahụ ndị Rom na ebe igwu mmiri nke nwere mkpụrụ osisi na ahịhịa na-atọ ụtọ, ị ga-anụ ụtọ a ọnụnọ dị ka mba ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịnọ na họtel a, ị ga-amata otu kpakpando ise ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ ezumike dị egwu nke jupụtara na gastronomy, zuo ike n'ubi ya, na-anụ ụtọ ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ na-enwe ọ bathụ mmiri Roman ya. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ị nwere ike kporie ndu obodo Córdoba ma chọpụta amara niile obodo a na-echere gị izute.
Hospes Palau de la Mar Hotel (Valencia)
N'okpuru Valencia, Hospes Palau de la Mar Hotel bụ ụlọ nkwari akụ ise nke ga-eme ka ị mata obodo nke mbụ Valencia. Ọ bụ nnukwu ụlọ dị na s. XIX nke na-azaghachi na mmụọ mmiri nke e ji mara obodo Valencian. Ọ bụ ụlọ nkwari akụ nke oge a, nke nwere ụlọ ọrụ ị ga-ahụ n'anya na nke ahụ dị iche na nnukwu ụlọ nke ụlọ ahụ. Ubi ya na oghere ya ga-eme ka ị nwee obi ụtọ ịnọ na họtel mgbe ọ bụla ị laghachiri na njem gị site na obodo.
Gastronomy nke obodo di egwu, ma ọ bụrụ na ịnweghị oge iji rie otu ụbọchị n'ụlọ nri ndị mara mma n'obodo ahụ, ị ​​nwere ike ịnụ ụtọ nri ụlọ nkwari akụ nke nwere nri mbinye aka na ihe ndị sitere n'okike sitere na ala Valencia, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ụtọ niile.
Na mgbakwunye na ọrụ nke ụlọ nkwari akụ maka ọdịmma gị dịka spa, ị nwere ike ịtọ ụtọ obodo ahụ dịka ị ga-ahụ onwe gị na Eixample Noble nke obodo, ị ga-anọ ezigbo nso na-aga na etiti akụkọ ihe mere eme. Gaghị ajụ ihe ọzọ!
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịga ugwu nke mba ahụ ma gaa Galicia, mgbe ahụ i nwere ike iche echiche ịga ụlọ nkwari akụ a magburu onwe ya dị na Vigo. Ezigbo ụlọ nkwari akụ ahụ dị na obodo a mara mma, ị nwere ike ịhụ otú ụlọ nkwari akụ ahụ si nwee facade na-arụ ọrụ na imezigharị kpamkpam ya na atụmatụ mara mma na nke ọwụwa anyanwụ yana nke a na-eme ugbu a. Ọ bụ ụlọ nkwari akụ nwere oke nghọta mara mma na mgbakwunye na ịnye ọtụtụ ọrụ na nlebara anya ahaziri iche.
Obodo Vigo bụ ndị kasị ukwuu na Galicia na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị 300.000, nwere oke osimiri na ọdụ ụgbọ mmiri dị egwu, ị gaghị enwe ike ịhapụ ọdịnala ya niile, oge ntụrụndụ na gastronomy. Na mgbakwunye, mma nke ụsọ oké osimiri yana ubi ya ga-eme ka ịchọọ ịlaghachi tupu ị pụọ.
Nnukwu ụlọ oriri na ọ Donụ Donụ Don Gregorio (Salamanca)
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga obodo Salamanca, ị gaghị enwe ike ịhapụ ohere ịnọ n'ụlọ nkwari akụ ise a dị n'etiti obodo ahụ, nke mere na ị nwere ebe akụkọ ihe mere eme na mpaghara ọ bụla nke obodo ahụ ịchọrọ ịga ma tụgharịa uche n'ime ogologo ije.
Ọ bụ ụlọ akụkọ ihe mere eme nke eweghachiri kpamkpam ka ị ghọọ ụlọ nkwari akụ ị ga-ahụ n'anya. You nwere ike ịnụ ụtọ ọnụnọ pụrụ iche na nnukwu nkasi obi na ịdị mma mgbe ị kpebiri ịnụ ụtọ agbata obi nke Salamanca, jupụtara n'akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị.
Seen hụla nhọrọ ụlọ nkwari akụ 5 nwere amara na okomoko na Spain ka ị nwee ike ịhọrọ nke kachasị amasị gị na nke nwere ike ime ka ọ dị gị ka ị nọ n'ụlọ ọbụlagodi na ị nọ n'obodo ọzọ. Nkasi obi na nkasi obi dị oké mkpa iji nwee obi ụtọ na obodo ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Hotelslọ nkwari akụ 5 na Spain na amara na okomoko
Kedu ụlọ ngosi ihe mgbe ochie 20 a na-agakarị n'ụwa?
Ofufe na oge mbụ